လက်ရှိချစ်သူလေးကိုအလင်းပြလိုက်လို့ ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့ ခင်လေးနွယ် - Myannewsmedia
လက်ရှိချစ်သူလေးကိုအလင်းပြလိုက်လို့ ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေရတဲ့ ခင်လေးနွယ်
By SPACEPosted on July 13, 2019 July 13, 2019
ချ စ် စ ရာေ ကာ င်းတဲ့ အြ . ပု . မူဟန်ပန်တွေနဲ့ ပုရိသတွေကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်သူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင် Khin Lay Nwe ပဲြ ဖ စ် ပါ တ ယ် ။ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တော် Khin Lay Nwe ကတော့တစ်နေ့တစ်ခြား ပိုပိုပြီးလှလာတာပဲ ဖြ စ် ပါတ ယ်။ ဖော်ရွေပျူဌာတတ်တဲ့သူမရဲ့ဖြူစင်သောစိတ်ထားလေးတွေကြောင့်လည်း အနုပညာရှင်များအပြင် ပရိတ်သတ်များကချစ်ခင်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယ်။ ဖော်ရွေပျူဌာတတ်တဲ့သူမရဲ့ဖြူစင်သောစိတ်ထားလေးတွေကြောင့်လည်း အနုပညာရှင်များအပြင် ပရိတ်သတ်များကချစ်ခင်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အ . နု ပ . ညာ လု ပ် ရှား မှုေ တွ လည်း ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ခရီးထွက်ခြင်းကိုလည်းကြိုက်နှစ်သက်သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အမြဲလိုလိုသူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့်ပရိ တ် သ တ်ေ တွ အ တွ က် ဓာတ် ပုံေ လးေ တွ အြ မဲ တင်လေ့ရှိသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းရုံတင်မကပဲ မြင်ရသူပရိတ်သတ်တွေအဖို့ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Khin Lay Nwe ကတော့ လက်ရှိသူမရဲ့ချစ် သူ ကို အ လ င်းပြလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Instagram မှာ နှစ်ယောက်သား Gym ဆော့နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတစ်ခုကိုတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ချစ်သူလေး နဲ့  ပုံ ရိ ပ်ေ လးကိုတင်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကတော့ ဘယ်သူလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Photo – Rainchain
လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒက် — suehninsi
Previous post Victoria လေးရဲ့ DNA နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှဦးဆောင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်
Next post အိမ်သာတတ်ရင် တံခါးဖွင့်ပြီးမှတက် တတ်တယ်ဆိုတဲ့ ထက်ထက်ထွန်း